कन्टेनरमा ज्या न गुमाउनुअघि यी युवतीले पठाएकि थिइन् मुटु हल्लाउने म्यासेज, जस्ले बनायो सबैलाइ भावुक! – PathivaraOnline
Home > विश्व > कन्टेनरमा ज्या न गुमाउनुअघि यी युवतीले पठाएकि थिइन् मुटु हल्लाउने म्यासेज, जस्ले बनायो सबैलाइ भावुक!
कन्टेनरमा ज्या न गुमाउनुअघि यी युवतीले पठाएकि थिइन् मुटु हल्लाउने म्यासेज, जस्ले बनायो सबैलाइ भावुक!
admin October 27, 2019 विश्व	0
एजेन्सी। बेलायतमा लरी कन्टेनरमा फेला परेको ३९ जनाको श वमध्ये तीनजना भियतनामी नागरिक भएको पत्ता लागेको छ । बुधबार एकजना भियतनामी युवतीले परिवारलाई मेसेज पठाइन् कि उनी स्वास फेर्न नसक्ने अवस्थामा छिन् । २६ वर्षीया फाम थी ट्रा माईले लेखेको सन्देश थियो, ‘आमा बुवा, मेरो विदेशयात्रा असफल भयो, म साँच्चै माफी चाहन्छु ।’ ‘सास फेर्न सकिनँ म मर्दैछु, आमा बुवा म तपाईहरुलाई साँच्चै धेरै माया गर्छु ।’
उक्त मेसेज पठाएपछि परिवारले उनीसँग सम्पर्कविहिन भएको जनाएको छ । समाचार एजेन्सीहरुले माईलगायत अन्य तीनजनाको परिवारबारे जानकारी पाएको उल्लेख गरेका छन् । माई ले मानव त’स्करहरुलाई बेलायत पुग्न ३० हजार पाउन्ड तिरेको परिवारका सदस्यलाई उदृत गर्दै समाचार एजेन्सीहरुले लेखेका छन् । माईको अन्तिम मेसेज मंगलबार प्राप्त भएको थियो । बेल्जियमबाट प्रस्थान गरेपछि उनले मेसेज पठाएको र त्यसपछि कुनै जानकारी नआएपछि कन्टेनरमा मृ’त हुनसक्ने परिवारको आशं’का छ ।
माईको यात्रा ३ अक्टोबरबाट शुरु भएको थियो । उनी चीन पुगेर त्यहाँबाट यूरोपतर्फ लगिएकी थिइन् । २० दिनको यात्रामा उनीहरु बेलायत पुगेपनि अन्तमा ज्या’न गुमाउन पुगेका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानले कन्टेरनमा राखिएका ३९ जनाको मृ’त्यु ठण्डीले भएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
रेफ्रिजेरेटर भएको कन्टेनरमा तापक्रम माइनस २५ डिग्रीभन्दा कमसम्म हुने व्यवस्था थियो । निकै कम तापक्रमका कारण उनीहरुको मृ’त्यु भएको हुनसक्ने द मिररले लेखेको छ । कन्टेनरलाई बेल्जियमबाट बेलायत पुर्याइएको थियो ।
बेलायतको लन्डन नजिकै चेकजाँचका क्रममा ३९ श व बरामद भयो । जसमध्ये एकजना किशोरसहित ३१ पुरुष र आठजना महिला थिए । सबैजना चिनियाँ नागरिक भएको भनिएपनि अन्य देशका नागरिक समेत भेटिएका छन् ।
घटनामा लरी चालक २५ वर्षीय मो रबिन्सन प क्राउ परेका छन् । उनी उत्तरी आइरल्यान्डका हुन् । रबिन्सनसँगको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि थप दुईजनालाई प’क्राउ गरिएको छ ।
आकस्मिक अतवरण गर्ने क्रममा विमानमा आगो लागेपछि ४१ काे मृत्यु, केहि जिवितै…